Mila Ny Vaovao Farany Momba Ny Tondradrano Any Jakarta ? Misy Ny Fampiasa Ho An’Izany. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Oktobra 2016 2:46 GMT
Feri Yadi, mponina ao Muara Baru any avaratr'i Jakarta, mijoro eo ambonin'ny fefiloha vao natao vao haingana hiarovana ny faritra misy azy. Kely ny finoany fa hiasa araka ny ilàna azy ilay rindrina. “Toy ny tany aloha, ho vaky tahaka ity” hoy izy. Sary: Muhammad Fadli/GroundTruth
Ity lahatsoratra nosoratan'i Chris Bentley ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org , tamin'ny 16 Septambra 2016. Navoaka eto indray izany noho ny fifahekana fifampizarana votoaty.
Tahaka ireo Jakartana an-tapitrisa, dia monina amin'ny tanàna manamorona ny iray amin'ireo renirano 13, any amin'ny faritry ny tanàna taloha antsoina hoe Kampung i Dedi Setiawan. Hipoka olona mivarotra tsakitsaky sy fahanà finday ivelan'ny sarety ilay lalàna tsy voarakotra tara, eny anelanelan'ny trano vita amin'ny volotsangana sy trano kely vita amin'ny biriky no anahazan'ny olona ny lamba avy nosasàna, ary lakana hazo sintonina amin'ny tady mifatotra eny amoron-drano no fiampitàna ny renirano.
Mety ho mafy ny fiainana manamorona ireo reniranon'i Jakarta. Miatrika ny olana faran'izay ratsy indrindran'ny hasomparan'ny tondradrano amin'ny ankamaroan'ny faritra an-drenivohitra manerantany ilay tanàna, satria matetika miakatra noho ny oran'ny varatraza ireo renirano 13 ireo, mivoaka mankany amin'ny faritra mifanetin'ny renivohitra izay vetivety foana dia mivarina any amin'ny faritra ambanin'ny haavon'ny ranomasina.
Tamin'ny 2013, naniraka an'i Setiawan hiakatra ho any amin'ny rihana faharoan'ny tranony ny fiakaran'ny rano, ary nandritra ny tondradrano dia tsy afaka nifandray taman'olona izy mba hahalalana izay miseho any an-kafa.
“Tamin'izany fotoana izany mantsy tsy mba nisy rafitra hiseraseranay” hoy izy.
Fa nanova izany ny firoborobobon'ny haino aman-jery sosialy.
“Amin'izao fotoana izao dia ny WhatsApp sy ireo vondrona ao amin'ny Facebook no ampiasainay hifaneraserana amin'ny hafa” hoy izy.
Voazara ara-potoana ny vaovao — afaka mandefa ny sarin'ny tondradrano avy amin'ny faritry ny tanànany any amin'ny namany ireo monina amin'ny faritra ambony mba hahafahan'ny olona any amin'ny faritra ambany miomana.
Haingana kokoa noho ny miandry ny fanambaràna ôfisialy ny vaovaon'ny tondradrano alefa amin'ny aterineto, ary milaza ireo mponina fa ny vaovao amin'ny aterineto no atokisany kokoa satria avy amin'ny tena olona izany.
Lazain'i Fajar Inayati, izay monina amin'ny faritra ambonin-dry Setiawan fa nandritra ny tondradrano farany teo dia efa voaparitaky ny namany talohan'ny nahazoan'ny governemanta vaovao ireo sary, eny talohan'ny nandehanany tamin'ny vaovao tao an-toerana aza.
Ranomasina manafotra ireo làlam-be sasany any amin'ny faritr'i Muara Angke any Jakarta na dia mandritra ny fidinan'ny ranomasina sy ny maintany aza. Mpanjono miasa any amin'ny helodrano akaikin'i Jakarta no ankamaroan'ny mponina ao amin'io distrika io. Sary : Muhammad Fadli/GroundTruth
“Tsy tany amin'ny toerana nipoiran'ny tondradrano no nisy anay, fa nandre izany tamin'ny namanay izay nizara izany izahay,” hoy i Inayati. ” Tany ry zareo, ka inoako fa tsy maintsy marina sy azo antoka ilay vaovao.”
Ny hafatra tao amin'ny haino aman-jery sosialy no nanetsika azy sy ireo mpifanolo-bodirindrina aminy hanomboka ny fanomanana ireo lasakam-pasika hiarovana ny rano ao amin'ny helodrano.
Ekena fa tsy azo antoka ihany koa ny haino aman-jery sosialy indraindray. Haingam-piely ny tsaho, ary na dia ny vaovao mahasoa aza dia mety ho saron'ny fifanjevoan'ny loza voajanahary.
Haingana sy azo antoka kokoa
Eto no miditra an-tsehatra ny PetaJakarta. Loharano misokatra, ara-potoana tsara, sarintanin'ny tanàna ety anaty aterineto izay mandeha tsy voizina manivana ireo Bitsika momba ny tondradrano mba hanatsaràna ny fanazavàna sy hamenoana ny tsy ampy amin'ny tatitra ôfisialin'ny tanàna izany.
Rehefa misy mibitsika “banjir” — teny indoneziana ilazàna ny tondradrano– sy ny tenifototra @PetaJkt, dia mandeha tsy voizina ny PetaJakarta mamaly, amin'ny fangatahana ny fanamarinana ilay bitsika miaraka amin'ny sary voafangitra amin'ny toerana. Avy eo atambatr'ilay fampiasa ho ao amin'ny sarintany ahitana ny tondradrano farany, amin'ny aterineto izay azo antoka kokoa noho ny ireo hafatra avy amin'ny sosialy sasany, miaraka amin'ny angon-drakitra ôfisialin'ilay tanàna ny tatitra rehetra.
“Raha misy olona efatra miaraka amin'ny sary nalaina tamin'ny toerana samy hafa mampiseho tranga iray eo aminao, dia hananosarotra ihany ny hanambatra izany,” hoy i Etienne Turpin, Kanadiana mpanome endrika sy mpahay siansa mpikaroka ao amin'ny Lab Urban Risk ao amin'ny sekoly ambony momba ny teknolojia any Massachusets. Niarahany nanangana tamin'i Tomas Holderness, mpiara-miasa aminy, tamin'ny 2014 ny PetaJakarta. Amin'izao fotoana izao dia mampiasa ekipa iray misy teratany valo ao amin'ny biraon'ny Guntur akaikin'i Jakarta ry zareo.
Samy mianatra ny fiatrehana loza voajanahary i Holderness sy i Turpin, ka izany no nahasarika azy ireo ho any Jakarta. Lazain'i Turpin fa reny indray mandeha fa oharina amin'ny “labaoratoara velona ho an'ny loza voajanahary” i Indonezia. Ary Jakarta, hoy izy, no “karazan'ny foiben'izany labaoratoara izany. “
Trano vita amin'ny zavatra nofakofakoina manamorona an'i Ciliwung, renirano iray amin'ireo 13 mamakivaky an'i Jakarta. Ireo fako miangona eny amoron-drano no mampiseho ny haavon'ny rano mandritra ny fotoanan'ny varatraza. Sary : Muhammad Fadli/GroundTruth
Araka ny tombatombana iray, dia renivohitry ny fampiasana Twitter ihany koa i Jakarta, izay lazain'i Turpin ho mahatonga azy ho loharanon-karenan'ny angon-drakitra, feno ilay antsoina hoe ” olona mpanaitra ” mba ho fanarahana ireo loza voajanahary sy fanomezana tatitra ara-potoana.
Ampitahao amin'ny sarintany ara-potoanan'ny tondradrano avoakan'ny PetaJakarta ny fomba mahazatra nny tanàna mamoaka sarintany PDF isaky ny enina ora.
“Tsy manome toky anao amin'ny fandraisanao fanapahankevitra ny fanànana sary amin'ny sarintany mivoaka isaky ny adin'ny enina raha toa ianao ka te-handao ny asanao vetivety mba haka ny zanakao any am-pianarana, na hijery ireo ray aman-dreninao efa antitra,” hoy i Turpin.
Izany no momba ny fanapariahana ny fitantanana ny loza voajanahary, hoy izy.
“Raha toa ka mivangongo any an-tànan'ny governemanta ny fitaovana fanaoahankevitra dia manana vato misakana isika amin'ny fampitàm-baovao. Fa raha voaangona, voamarina ary voaparitaka ara-potoana ny vaovao, dia manana mpanapa-kevitra 31 tapitrisa hanapa-kevitra isika, ‘Tokony hamily fiara amin'ity làlana ity ve aho ? Tokony hialako ve ny faritra sasany ?’ “
Noho ny hafainganany sy ny fanomezany ny antsipirihiny, na dia ireo manampahefana sasany aza dia nitodi-doha nankany amin'ny PetaJakarta. Fotoana fohy taorian'ny nivoahany tamin'ny aterineto, dia namporisihin'ny governoran'i Jakarta ireo mpanaraka azy ao amin'ny Twitter mba hampisa ny PetaJakarta raha hibitsika momba ny tondradrano.
Ambaran'i Anto Sugianto, izay miasa ho an'ny tanàna any amin'ny faritra mora tondraky ny rano any avaratr'i Ancol fa fitaovana tena ilaina amin'ny famahàna ny olan'ny tondradrano ny Petajakarta.
Nandritra ny tondradrano tamin'ny Aprily, dia nampiasaina ny PetaJakarta, hoy Sugianto, hanampiana ireo ekipany amin'ny fandraisana fanapahankevitra momba izay toerana hametrahana ny paompy hitroka ny rano eny amin'ny lalàmbe sy izay làlana hakatona hiarovana ny olona tsy ho voafandrika ao anaty fiarany. Napetraky ny ekipany mihitsy aza ny sary voafaritra avy amin'ny zanabolana ho ao amin'ny tranonkala no sady niasa ry zareo.
Nanomboka nanova ny fomba fiatrehana ny tondradrano tao an-tanàna ny PetaJakarta, hoy i Sugianto, manomboka amin'ny ezaka ataon'ny any ambony hatrany ambany, ka hatramin'ny fiaraha-miasan'ny tanàna sy ny mponina ao aminy.
“Tsy Kelurahana [distrika] ihany no afaka manome vaovao ho an'ny olona,” hoy i Sugianto. “Amin'izao fotoana izao, mahazo ny vaovao avy any amin-dry zareo ihany koa izahay. ‘Ty sy ‘Nday.”
Modely ho an'ny hafa
Ary fantatra hatrany ivelan'i Indonezia ny PetaJakarta. Samy nilaza ny Komity federalin'ny Fifandraisana any Etazonia sy ny Federasiona iraisam-pirenenan'ny vokovoko mena sy ny volantsinana mena fa modely iray amin'ny fandraisana anjaran'ny vondrom-piarahamonina amin'ny famahàna ny olan'ny loza voajanahary ny PetaJakarta.
Fijery avy any ambony ny faritra avaratr'i Jakarta. Saika ny faritra rehetra amin'ny ampahany avaratry ny tanàna no ambanin'ny haavon'ny ranomasina no misy azy. Sary: Muhammad Fadli/GroundTruth
Ekena fa tsy afaka hanampy amin'ny fisorohana ny tondradrano mandripaka ny mponin'i Jakarta amin'izao fotoana izao, toa an-dry Dedi Setiawan sy Fajar Inayati, ilay sarintany tsara tarehy amin'ny aterineto. Ilaina ny fanavaozana ny rafitry ny lakandrano ao an-tanàna, isan'izany ny hevi-baovao momba ny fandaminana ny tanàndehibe sy ny fampiasàmbola amin'ny fotodrafitrasa maitso mba hamerenana indray ampahany amin'ny tontolo rarivaton'i Jakarta.
Saingy ireo tanàna tahaka an'i Jakarta dia miady mba ho zatra amin'ny haavo vaovaon'ny rano izay avy amin'ny fiovaovan'ny toetrandro, ireo fitaovana amin'ny aterineto toy ny PetaJakarta dia mety hanampy azy ireo hiaina tsaratsara kokoa miaraka amin'izay tsy azony ovàna — sady ahafahany mifandray amin'ny hafa mandritra izany.
Vakio na henoy ny andiany rehetra : Miaina miaraka amin'ny fisondrotry ny ranomasina [Angl]
Vokatry ny fiarahamiasa tamin'nyThe GroundTruth Project ity tatitra ity.